Amagumbi okulala ama-2 eVilla|Imbonakalo eMesmerizing|Ukutshona kwelanga|iintaba
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguAjay
Ingqina umbono owoyikekayo ukusuka balcony nto leyo eya kukwenza uzive ukhululekile kwaye ukonwabele ukutshona kwelanga ukusuka apho.Intlambo entle ejongene amagumbi kwi Villa .Imekobume ekhululekile kwaye kude kwindawo ephithizelayo. Ukuba ufuna amava e-Shimla yokwenyani kwaye ubone inkcubeko yayo, ndwendwela le ndawo ifanelekileyo apho ubomi obutofotofo bexesha langoku obunobunkunkqele obukhethiweyo bangaphakathi budibana nezithethe zeShimla zenkcubeko.
Yindlu enamagumbi amahlanu okulala, iindwendwe ziya kuba nokufikelela kumagumbi amabini okulala. Amagumbi amabini okulala abekwe kumgangatho wokuqala wendlu kwaye kukho indawo yokuhlala eqhelekileyo kunye negumbi lokutyela. Amagumbi amabini okulala anamagumbi okuhlambela amabini adityanisiweyo. Unokuphumla kwiBalcony ujonge imbonakalo entle yeCedar kunye nembono emangalisayo yokutshona kwelanga ngokuhlwa, okanye ube ebhedini yakho ubukele inkqubo oyithandayo kwiTV exhonywe eludongeni.
Ibala elidumileyo lemingxuma eyi-18 iNaldehra yimizuzu eyi-10 yokuqhuba ukusuka kwipropati Ukuhamba kwendalo entle kumahlathi ashinyeneyo e-deodar ye-4- 5 Kms (enye icala) kunye neTempile edumileyo yaseMaa Bhadra Kali endleleni. Kukho indawo yepikiniki kwindawo ekufutshane .
Ndikhona ngokobuqu kwipropathi ukudibana kunye nokubulisa iindwendwe ekufikeni kwazo , kwaye ndihlala ndifumaneka efowunini kwaye sinomgcini omangalisayo kunye nompheki okhoyo kule ndawo .